Goa, janno ku taal Hindiya | Wararka Safarka
Goa, janno ku taal Hindiya
Mariela Carril | | Hindiya, Maxaa la arkaa
Goa Waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan meelaha kuleylaha ah Hindiya. Waa himilada dad badan oo boorsooyin qaada oo raadinaya xeebo wanaagsan, qalaad, dhaqan iyo kala duwanaansho. Gobolkan Hindiya wuxuu kudhowyahay Badda Carbeed wuxuuna ku raaxeeyaa a cimilada diiran inta badan sanadka, inkasta oo ay tahay inaad u feejignaato roobabka iyo kuleylka daran bilaha qaarkood.
Maanta waa markigeenii aan ku dhiiran lahayn Goa ka dibna qorsheyneyno safarkayaga xiga ee Hindiya.
2 Dalxiiska Goa
Sidaan soo sheegnay, waa gobol ka tirsan Hindiya oo ku fadhida wax ka yar 3.700 kiiloomitir oo laba jibbaaran, oo leh xeeb badan iyo aag kuleyl ah oo u dhow Badda Carbeed. Maalmaha ugu kulul waxay dhacaan bisha Maajo, waxaana ku xiga roobab mahiigaan ah oo soconaya illaa Sebtember.
Goa wuxuu u qaybsan yahay Waqooyiga Goa iyo Koonfurta Goa y caasimaddiisu waa magaalada Panaji. Boortaqiisku wuxuu gumeystay qeybtaan Hindiya horraantii qarnigii XNUMX-aad si uu u xakameeyo ganacsiga dhirta, isagoo ka adkaaday Muslimiinta iyo dadka deegaanka. J) Haa, Goa waxay noqotay caasimadda Bortuqiiska Hindiya iyo saldhiga ay ka howlgasho boqortooyada gobolka. Xariir iyo dhoobada ka timaada Shiinaha, luul iyo dhuxul Faaris ah, noocyada Malaysiya ayaa markaa mari doona ku-xigeenka Goa ...
Markii ay yimaadeen badmareennadii Nederland awooddii Boortaqiiska ee Goa waxay bilaabeen inay hoos u dhacaan. Xaaladdaan waxaa isugu darsamay cudur faafa, ka dibna isku dhacyo lala galay sayidyadii maxalliga ahaa ugu dambeyntiina, ka dib markii ay u guureen caasimadda halka hadda loo yaqaan 'Panaji', Ingriiska wuxuu qabsaday Goa bilowgii qarnigii XNUMXaad. Boortaqiisku wuu dhexdhexaad ahaa intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka sidaa darteed maraakiib badan oo Jarmal ah ayaa halkan lagu arkay iyagoo raadinaya magangalyo.
Ugu dambeyntiina Hindiya waxay xorriyadda ka qaadatay Boqortooyada Ingiriiska ee 1947 yuhuud Boortaqiiska waxaa si rasmi ah looga codsaday inuu soo celiyo Goa. Boortaqiiska ma uusan dooneyn ka dibna banaanbaxyada looga soo horjeedo iyo xayiraadaha ayaa bilaabay inay ku qasbaan inay baxaan. Wax walba waxay ku dhammaadeen dagaallo xoogaa 1961, Burtuqiiskii wuu baxay, Goa wuxuu ka mid noqday gobollada ka tirsan Hindiya.
Markaan intaas oo dhan idhi, marwalba waxaan u arkaa inay lagama maarmaan tahay in wax laga ogaado taariikhda gobol aad qorsheyneyso inaad booqato, aan aragno waxa ay siiso dadka safarka ah. Ugu horreyntii, waxa qofku u yimaado inuu ka raadsado qaybtan Hindiya: Xeebaha Xeebaha ugu yar ayaa laga helaa Koonfurta Goa oo halkan kuwa ugu fiican ayaa ah xeebaha Arossim iyo Utorda, oo u dhow magaalada Majorda. Waqooyiga Goa dhexdeeda ayaa ah Baga, Anjuna iyo Calangute.
Dhamaan xeebaha Goa waxaad ku sameyn kartaa isboortiga biyaha sida barafka, paragliding, quusin, snorkeling ama moos raacid madadaalo leh ama booqo beero udgoon, waana sababta markii hore ay yurubiyanku u yimaadeen Hindiya. Tusaale ahaan, Sahaki Spice Farm ama Beerta Parvati, oo ah takhasus gaar ah oo lagu beero basbaaska Ponda. Hadaad kaligaa tagtid, iskuday inaad goor hore tagto maxaa yeelay intaas kadib kooxo abaabulan ayaa yimaada wuuna buuxsamayaa.
Waxaad sidoo kale sameyn kartaa Kayaking ku taal webiga Aguada ama maraakiibta mara webiga Mandovi ama Valpoi. Meel caan ah oo ku taal Xeebta Baga waa St Anthony's Bar. Waxaa jira qolalka fadhiga, miisaska leh shumacyo, muusig, karaoke iyo waxyaabo badan oo xiiso leh. Albaabka ku xiga waa maqaayada Britto, meel kale oo lagu taliyo. Markay habeenkii dhacdo, wax walba waxay u nool yihiin boorsooyinka sidaas darteed diyaar u noqo inaad la dhaqanto bulshada.
Panaji, caasimadda Goa waa meel kale oo aadan ka maqnaan karin. Aaway meeday Old Goa, loo yaqaan hal mar sida Rome oo ka socota Estiyo. Halkan waa halka aad ku arki doontid kaniisadihii hore (Basilica ee Bom Jesus ama Kaniisada Santa Catarina, kan ugu weyn uguna booqashada badan), wadaaddo, matxafyo, dhismayaasha gumaysiga iyo qolalka farshaxanka. Waad ku dhex socon kartaa xaafada Latinka, oo ay la socdaan guriyaheedii hore ee Boortaqiiska, aad ayey ugu fiican tahay inaad sawiro ku soo dhigto barta Instagram. Runtii, Old Goa waa Dhaxalka Adduunka.
Xeebaha iyo taariikhda, laakiin sidoo kale duurjoogta. Waxaad booqan kartaa Beerta Qaranka Mollem si uu ula kulmo bakhaarro, orso iyo deero, ama Sanctuary Bhagwan Mahavir Duurjoogta. Waxaa jira in kabadan 200 oo nooc oo shimbiro ah goobtuna waxay ku taal cagaha buuraha Galbeedka Ghats, waana la booqan karaa maalin kasta 8:30 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo. Adiguna waad awoodaa eeg hoonbars hadaad safar ku tagto Jasiirada Weyn ama biyaha Candolim, Calangute ama Sinquerim. Hay'ad dalxiis oo wanaagsan oo ku taal John's Dolphin Tour, oo leh 'dolphins no, no pay' falsafad.
Xeebaha, taariikhda, duurjoogta iyo farsamada gacanta. Xagee Gudaha Suuqa Aan Caadi Aheyn ee Ingo. Asalka suuqani waa inuu la yimaadaa imaanshaha nin Jarmal ah oo la yiraahdo Indo kaasoo soo jeediyay in la furo suuq dhoor, nooc ka mid ah suuqyada Sabtida ee Arpora. Waxay socotaa lix bilood sanadkii, xilliga qaboobaha, waxaadna heleysaa xoogaa yar oo ah inta udhaxeysa dhididka, silsiladaha hippie, maacuunta jikada iyo waxyaabaha udgoon, iwm. Waxaa jira DJ toos ah hadaadan jeclayn dadka badankood waad aadi kartaa habeenkii.
Goa waxay 590 kiilomitir u jirtaa Bombai, ilaa kow iyo toban saacadood oo safar ah iyo hal saac oo diyaarad ah. Waa fikrad fiican inaad ka bilowdo Panjim oo aad sii joogto degmada taariikhiga ah waa fikrad wanaagsan halkan. Haddii aad lacag hayso waxaa jira hudheelo qurxoon oo qurux badan maadaama ay ka shaqeeyaan guryihii hore ee gumeysiga. Haddii aad jeceshahay fikradda ah inaad ku degto xeebta, woqooyiga iyo koonfurta labadaba waxaa jira hoy noocyo kala duwan leh. Haddii aad jeceshahay Airbnb sidoo kale dalab ayaa halkan ka jira.
Ujeeddadu waa in ka badan 10 maalmood lagu tamashleeyo Goa, lagu raaxeysto, waqti la helo, oo aan la cararin. Waad ijaaraysaa mootada adigana waxaad leedahay madax-bannaanid dheeraad ah, marka lagu daro inaad tahay ikhtiyaarka ugu fiican ee runtii wax walba lagu ogaado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Maxaa la arkaa » Goa, janno ku taal Hindiya